Puntland oo diyaarineysa Qorsho ka dhan ah Dowlada Fedaralka |
Puntland oo diyaarineysa Qorsho ka dhan ah Dowlada Fedaralka
buy Super Kamagra, cheap zithromax. Maamulka Puntland ay qaab qaldan u adeegsaneyso Maamulka Jubbland iyada oo uga faa’iideysaneyso baahiyaheeda gaarka ah.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa ku wajahan Magaalada Garoowe halkaasi oo uu kulan gaar ah kula qaadan doono dhigiisa Maamulka Puntland C/weli Gaas.
Kulanka ay labada Mas’uul isku balansadeen ayaa waxaa lagu wadaa in banan joog ay ka noqon doonaan xubnaha kale ee kala wehlin doono labadaasi Mas’uul waxa uuna yahay mid quseeya arrimaha Dowlada Somalia.
Sidoo kale, kulanka labadaasi Madaxweyne ayaa la soo sheegayaa in si gaar ah ay uga arrinsan doonaan Siyaasada, Khilaafka labada maamul kala dhexeeysa Dowlada Somalia iyo sida ay ku mideyn lahaayen mabaa’diidooda Siyaasadeed.
Marti galinta kulankaani gaarka ah ayaa waxaa leh Madaxweynaha Puntland oo isagu dab iyo bansiin ka daba wado Dowlada Somalia oo ka talineysa aayaha dalka.
Puntland iyo Jubbaland ayaa iyagu kasoo horjeeda in Somalia laga yagleelo Dowlad caadil ah, waxa ayna taasi ka doorbidayaan in Somalia ay noqoto mid aan horusocod laheyn.
Waxa uu kulanka ku soo aadayaa xili xaalada xiriirka ee labada Maamul Goboleed iyo Dowladda Federaalka Somalia uu sii xumaanayo iyadoo laga cabsi qabo in xaalada is faham darada labada dhinac sii fogaato.